Tumira Email Kupfuura SMTP MuWordPress Iine Google Workspace uye maviri-Factor Kusimbiswa
Chipiri, January 26, 2021 Chipiri, January 26, 2021 Douglas Karr
Ini ndiri mutsigiri mukuru weTwo-Factor Kusimbiswa (2FA) papuratifomu yega yega yandiri kumhanya. Seye mushambadzi anoshanda nevatengi nedata revatengi, ini handingakwanise kungwarira nezve kuchengetedzeka saka kusanganiswa kwemaphasiwedi akasiyana siyana kune yega saiti, ndichishandisa Apple Kiyi senge dura repassword, uye kugonesa 2FA pane yese sevhisi inofanirwa. Kana iwe uchimhanyisa WordPress seyako zvemukati manejimendi system, iyo sisitimu inowanzo gadzirirwa kupusha email mameseji
Iko hakuna zuva rinopfuura iro ini ndisiri kuunzwa nepoll, kuongorora, kana kubvunzwa mhinduro. Kunze kwekunge ndanyatsogutsikana kana kutsamwiswa nechiratidzo, ini ndinowanzo bvisa chikumbiro ndoenderera kumberi. Ehezve, nguva dzese, mukati mechinguva, ndinobvunzwa mhinduro uye ndichiudzwa kuti zvaizokosheswa zvekuti ndinowana mubairo. Feedier ipuratifomu yemhinduro iyo inokutendera iwe kutora mhinduro nekupa mubayiro vatengi vako.